Who were Bengali, so called Rohingya?: တိုင်းပြည်အရေးထက် ဒေါ်လာအရေးကို ဦးထိပ်ပန်တဲ့ BBC
Anna Jones ရဲ့ မူရင်းဆောင်းပါးကိုတော့ ဒီ http://www.bbc.co.uk/news/world...-asia-pacific-11595983 မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်...
ဘီဘီစီလို သိက္ခာရှိ သတင်းဌာနအနေနဲ့ ဒီလို လွဲမှားနေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စီစစ်မှုမရှိပဲ ထုတ်လွှင့်တဲ့အတွက် ဖြေရှင်းမှု တစ်ခုခု ထုတ်ပြန်သင့်ပါတယ်..... ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလည်း စာနာသင့် ပါတယ်.... ဘူးသီးတောင် မောင်တောမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ လူမသိ သူမသိ ပြစ်မှုတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်စေချင်ပါတယ်....
ရခိုင်လူမျိုးများက ဗုဒ္စဘာသာဝင်တွေပါ။ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကိုအဲ့ဒီကနေသယ်လာကတည်းရှင်းပါတယ်။ BBC မှာလုပ်ကိုင်သွားတဲ့ မြန်မာတွေထဲမှာလည်းရခိုင်လူမျိုးတွေပါပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စလေးက သေးသေးလေး ဆိုတဲ့အကြောင်းချစ်ရာပေမဲ့ အခုအနေ အထားက ခေါင်းလေးဝင်ပါရစေ၊ ကိုယ်လေး ၀င်ပါရစေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အနေအထားကို ချိုးနင်းလိုက်တဲ့ အပြုအမှုပါဘဲ။ ဒါကို BBC အနေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် မကြည့်ဘဲ ၊မတွက်ဘဲ သတင်း တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပြတဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုအုံးကျွန်တော်တို့ ကန့် ကွက်ပါ တယ်။
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ကိစ္စများအတွင်း ကြီးမားသော ပြဿနာကို ထောင်ပေးသော၊ အက်ကြောင်းပေး သော အနေအထားကို လုပ်ဆောင်သည့် သတင်းဌာနအဖြစ်ကိုတော့ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။
သတင်းဌာနတွေကိုယ်တိုင် လူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုဇောင်းပေးပြီးတော့တင်လိုက် ကြ တာနောက်ဆုံး နိုင်ငံတာကာအစည်းဝေးတွေ၊ အာဆီယံတွေထိကိုသောသောညံ့သွားပါတယ်။
ဘာကြောင့်နဲ့ ဘယ်လိုသောအနေအထားတွေကြောင့်လုပ်ကြတယ် ဆိုတာတော့ Lobby လုပ်သူတွေ ဘဲသိမှာပါ ၊ နိုင်ငံရေးထိုးနှက်ချက်အကြောင်းကြီးကို ရှိနေပါတယ်။ နောက်ဆုူံး ဦးဥာဏ်ဝင်း အာဆီယံ မှာ ဘင်္ဂလီတွေဆိုပြီး လက်ညိူး ထိုူးမှအားလုံးက ဘင်္ဂလီဆိုတာကိုတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် လိုက်သုံးထွက် လာရ တဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒီအစ်ရှုးက မသေးပါဘူး။. အခုနောက်တကြိမ်ထပ်ပြီးတကျော့ပြန်ဝင်လာပါတယ်။ အကြောင်းတွေဆက်စပ်ပြီးတော့ ကြည့်ရင်တော့ သိပ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်လောက် ချိလိုက်မလည်း စဉ်းစားပါ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် နီးပါး ကြံကြံခံပြီးတော့ ဘာသာမတူ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ သွေးမနှောခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေပါ၊ ဒီအတွက် မိမိတင်ပြသော သတင်းသည် ကိုယ်ဘက်ကိုဘယ်လောက်ထိ ကြီးမားသော ရိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လာတာကို တွက်ဆကြည့်စေချင်ပါသည်။
ထိရောက်တဲ့ အထက်လူကြီးတွေဆီ (အောက်က ဌာနမှုးတွေဆီ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က ဘာပါဝါမှ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ခေါင်းညိမ့်ရသူတွေဘဲဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ဌာနအားလုံးကို ထိန်းချုပ်သူတွေ၊ ဒါရိုက်တာတွေဆီ၊ ဗြိတိလျှနိုင်ငံခြားရေးဌာန ဝန်ကြီးဆီ) တိုက်ရိုက် ကန့်ကွက်စာတွေ ပို့ကြပါ။
ဒီမြေပုံဆွဲသူ အချက်အလက်ပေးသူက နှစ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာက နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေကို မထည့်ထားတာကို အဓိကထား ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ထောက်ပြပါ။ ဘီဘီစီကို ချက်ခြင်းတောင်းပန်ခိုင်းပါ။
မြေပုံသုံးတဲ့ ဆောင်းပါရှင်ကော၊ နောက်ကကြိုးဆွဲသူ တမင်တကာ အချက်အလက်မှားပေးသူ မြန်မာပြည်က လာသူတွေဆိုတဲ့ လူတွေကိုလည်း ချက်ခြင်း အလုပ်ထုတ်ပြစ်ဖို့ ပြင်းပြင်း ထန်ထန်တောင်းဆိုကြပါ။
ပြည်ထဲက ရခိုင်အမျိုးသားတွေကိုလည်း ဒီမြေပုံကို ပြပါ။ ပြည်ပက လူတချို့ ဘယ်လောက် ယုတ်မာနေကြသလည်းဆိုတာ သိအောင်ပါ။
ရခိုင်ပြည်မှာ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ နေနေကြတဲ့ လူမျိုးမတူတူ ဘာသာမတူတူ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ် အဓိကရုန်းဖြစ်အောင်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ ကိုယ်က ယဉ်ကျေးတယ်။ နိင်ငံသားကောင်း ပီသတာကိုပြပါ။ ရခိုင်ပြည်သူ ပြည်သား တွေကို သူတိ့ရဲ့ သမိုင်းကို ဒီဆောင်းပါးရှင် အနောက်နိုင်ငံသား မိန်းမလို လူတွေ၊ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ ဆိုတဲ့ မီဒီယာသမားတစ်ချို့က ဘယ်လိုဖျောက်နေတာကိုဘာ အဓိကထားပြီး အသိပေးကြပါ။
ပြီးဒီဖြစ်ပြက်ခဲ့တာကိုလည်း မကြာမကြာ ပြန်တင်ပြပါ။ မဟုတ်တရုတ် လုပ်ခဲ့သူတွေကိုလည်း သတက်လုံး ဘယ်သူကမျှ မမေ့အောင် ဆက်လုပ်ရမယ်။ ဒါမှ နောင်ကျဉ်သွားမယ်။
Credit to - Let's Work , James Mmt , Than Saw ...
သီရိ ဧရာဝတီ FaceBook မှကူးယူတင်ပြသည်။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 3:17 PM
As BBC, must take out Rohingya photo from the map! English people are intelligent and they are prone to be canned. Our nations, luckily, this highlights that we have such kind of issue and now it's time to drive those Rohingya away from our land.
Please do not believe in those people who frighten our nations with the words of "the human right". Please just think of the logic. Every country has the right to protect its own nation. This is nature. This is pure human right. So this Rohingya issue is just insulting our nations. Be strong. We must drive away those Rohingya.
BBC = Bangali Best Co-ordinater ! U are representing the illegal Bangalis who are trying to claim their territory in Burma. Similarly,you better claim that you are native people of Australia and have fully rights like Aborigine people in Australia. You will be kick out from there. Do not insult the generous of Burmese and Rakhine people. Shame on you!